Otu esi eji ihe omuma ihe omuma banyere ika gi na 2015 | Martech Zone
Mgbe buzzword ịkọ akụkọ nwere ike ịbụ ihe ọhụrụ, echiche nke ịre ahịa anya abụghị. 65% nke ndị mmadụ n'ozuzu bụ ndị mmụta anya, ọ bụghị ihe nzuzo na onyonyo, eserese na foto bụ ụfọdụ ọdịnaya nwere mmasị na ntanetị mmekọrịta.
A na-ewere ndị na-ere ahịa ka ha na-ahụ ahịa ahịa site na ịmalite na ịkwanye echiche nke ịkọ akụkọ ebe anyi ji imagery na akuko akuko.
Gini mere eji Eme ihe omuma?
Sayensị na-agwa anyị na anyị noggins nwere wired iji hụ foto n'anya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ụbụrụ anyị na-etinye aka na nhazi ihe ngosi, na-atụgharị visuals na-erughị 1/10 nke abụọ.
Know ma ihe ọzọ ụbụrụ anyị hụrụ n'anya? Akụkọ. Anyị enweghị ike inyere ya aka. A manyere anyị ịhazi ozi n'ime akụkọ.
Ihe omuma a, nke meputara njikwa ihe onwunwe dijitalụ ụlọ ọrụ Widen, na-enye ụfọdụ nnukwu ọnụ ọgụgụ na ndụmọdụ gbara gburugburu visual ịkọ akụkọ na otu ị ga-esi jiri ya maka azụmahịa gị.
Lee ụfọdụ ihe ngosipụta site na infographic
Isiokwu ndị nwere onyonyo na-enweta 44% karịa echiche karịa isiokwu na-enweghị.
Ndị ọrụ na ịpị foto nke ezigbo ndị mmadụ bụ 200% dịka ọ nwere ike ịgbanwe gaa ire ere.
Ihe onyonyo mejuputara 93% nke ihe ntinye na Facebook (site na 83% na 2012).
Tweets nwere onyonyo na-anata 150% karịa retweets.
Ọ bụghị naanị na ihe ndị a na-ahụ anya na-akpalite njikọ aka dị ukwuu, kamakwa ha na-enyere ndị na-ege gị ntị aka icheta ọdịnaya gị ogologo oge.
Pịgharịa gaa na-agụ ndụmọdụ bara uru 14 maka ịkọ akụkọ anya, ma kesaa ụfọdụ n'ime akụkọ ịkọ akụkọ ọhụụ gị na ngalaba nke dị n'okpuru.
Tags: damnjikwa ihe onwunwe dijitalụịkọ akụkọịkọ akụkọgbasaa
Jul 15, 2015 na 9: 20 AM
Nnukwu echiche ebe a! Ihe omuma ihe omuma nwere ike buru ihe omuma ma dikwa nma iguta ya - ma oburu na ejiri ya mee ihe nke oma. Echere m na nke a bụ nnukwu ihe atụ! Daalụ maka ịkekọrịta.